၂၀၂၀ အတွက် ကမ္ဘာ့အချောဆုံး အယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားမင်းသားချောများ | News Bar Myanmar
၂၀၂၀ အတွက် ကမ္ဘာ့အချောဆုံး အယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားမင်းသားချောများ
ပရိသတ်ကြားမှာ လူသိများတဲ့ King Choice Website ကတော့ ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ခါနီး December 21 ရက်နေ့မှာပဲ တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ voting တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ “The 100 Most Handsome Men in the World 2020” ကိုတော့ ပရိသတ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်မဲပေးလို့ရပြီး ၁ နာရီခြား တစ်ခါ မဲပေးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခါပေးတဲ့ မဲ ၁၅ ခုတိတိ ပေးလို့ရတာဖြစ်လို့ အားပေးသူတွေဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်ပြီး ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နိုင်ဖို့ အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ မဲပေးခဲ့ကြတာပါ။
စာရင်းဝင် အ​ယောက် ၁၀၀ ဟာ နိုင်ငံပေါင်းများစွာက နာမည်ကျော်တွေဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ January 10 ရက်နေ့မှာပဲ ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့အခန့်ညားဆုံးအမျိုးသား အယောက် ၁၀၀ ထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံသား ၇ ဦး ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုသူတို့ကတော့…
18. Li Xian
20. Deng Lun
21. Yang Yang
23. Song Weilong
24. Jackson Yee တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ မဲပေးမှုအရ တရုတ်နိုင်ငံသား Xiao Zhan ဟာ ၂၀၂၀ အတွက် အခန့်ညားဆုံးအမျိုးသားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Zhan Ge ဟာ ၂၀၂၀ အတွင်းမှာတော့ စာရင်းပေါင်းများစွာရဲ့ နံပါတ် ၁ နေရာကို အကြိမ်ကြိမ်သိမ်းပိုက်ထားသူဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခါမှာလည်း အားပေးသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့် အဆင့် ၁ ကို ရရှိခဲ့လို့ ဂုဏ်ယူရသလိုပဲ “The 100 Most Handsome Men in the World 2020” မှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားနာမည်ကျော်များကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
Next ၂၀၂၀ အတွက် ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမိန်းမချောလေးတွေအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော တရုတ်အနုပညာရှင် အမျိုးသမီးများ »
Previous « King Choice စစ်တမ်းအရ 2020 ခုနှစ်အတွက် ရုပ်ရည်အချောမောဆုံး အနုပညာရှင်များ